CIN Khabar दूधमा आत्मनिर्भरको घोषणा कति वास्तविक?
दूधमा आत्मनिर्भरको घोषणा कति वास्तविक? देशकै उत्पादन नबिक्ने, बाहिरी आयात नरोकिएकोमा व्यवसायीको आक्रोश
विनोद शर्मा शनिबार, चैत २१, २०७७, ०३:५८:००
काठमाडौँ । नेपालमा वार्षिक ४ हजार मेट्रिक टन धुलो दूधको माग छ । तीन वटा उद्योगले वार्षिक २ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् ।
तर सरकारले भने एक हप्ताअघि मुलुकलाई धुलो दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । अघिल्लो वर्षको १ हजार ५ सय मेट्रिक टन दूध मौज्दात भएका आधारमा सरकारले आत्मनिर्भरको घोषणा गरे पनि वास्तविक आत्मनिर्भरका लागि भने चुनौती देखिन्छ ।
नेपालमा अहिले तीनवटा उद्योगबाट वर्षमा २ हजार मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन हुन्छ ।
गत वर्षको १ हजार ५ सय मेट्रिक टन मौज्दातलाई जोडेर धुलो दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिनु नै गलत भएको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटा बताउनुहुन्छ ।
‘चैतदेखि भदौसम्म बरु थोरै धुलो दूध उत्पादन गर्ने, मिल्क होलिडे हुन नदिने गरी भदौदेखि धुलो दूध बनाउनु पर्छ ।’ देवकोटाले भन्नुभयो, ‘अरु अद्योगहरू पनि सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । ती सबै उद्योगले पूणर् क्षमतामा उत्पादन गरे भने धुलो दूधमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।’
कुखुरालाई दानाको रूपमा पनि धुलो दूध खुवाउने गरिन्छ भने खोप बनाउन पनि धुलो दूधको प्रयोग हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘हजारौँ क्विन्टल दूध कुखुरालाई पनि खुवाउनुपर्छ । अहिले नेपालमा बनेको धुलो दूध २५ किलोको प्याकेटमा छ ।’ अध्यक्ष नारायण देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘तर विदेशबाट सानासाना प्याकेटमा धुलो दूध आउने भएकाले साना किसानहरूलाई सहज हुन्छ । आधा किलोसम्मको प्याकेट बजारमा ल्याउनु पर्छ ।’
धुलो दूधमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख मात्रै रहेको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । ‘हामी ढुक्क भएर बस्न मिल्ने अवस्था त हुँदै होइन । जनसङ्ख्या हरेक दिन बढीरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भारतबाट मात्रै ५ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धुलो दूध आयात भएको छ । त्यसबाहेक उरुग्वे, न्यूजील्याण्ड लगायतका देशबाट गरी १ सय २९ मेट्रिक टन धुलो दूध आयात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ हजार ६ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धुलो दूध आयात भएको र १ अर्ब ३० करोड ८० लाखभन्दा बढी रकम धुलो दूध किन्दा बिदेशिएको भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
‘भन्सार विभागको २०७७ फागुनसम्म ८ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा ६ सय ६५ मेट्रिक टन आएको देखिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यति धुलो दूधको मूल्य हेर्ने हो भने ३४ करोड २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।’
एक सय लिटर झोल दूधलाई प्रशोधन गर्दा ८ किलो धुलो दूध बन्छ । दूधको खरिद मूल्यमा झण्डै ५० प्रतिशत लागत थपिएपछि मात्रै धुलो दूध बनाउन सकिने डेरी उद्योग संघको भनाइ छ ।
३० अर्बको लगानी रहेको डेरी उद्योगलाई सरकारले धुलो दूधको आयात खुल्ला गर्दा अन्याय भएको संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालको भनाइ छ ।
आन्तरिक उत्पादनले थेग्ने अवस्थामा आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘हामीसँग एक हजार ५ सय मेट्रिक टन धुलो दूध मौज्दात हुँदै सरकारले आयात खुल्ला गर्नुहुन्थेन ।
हामी यसको विरोध गर्छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा हामी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायतमा विरोध जनाउँछौँ ।’
विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार एक जनाका लागि वार्षिक ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्छ । सरकारी तथ्याङ्कले भने उत्पादनको आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष ८९ लिटर दूध भाग पर्ने देखाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय धुलो दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले अल्पकालीन रूपमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ, ढुवानी अनुदान र दीर्घकालीन रूपमा जाडो र गर्मीमा फरक मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने माग डेरी उद्योगीहरूको छ । त्यसो नभएमा धुलो दूधमा आत्मनिर्भर भएको मान्न नसकिने उनीहरू बताउछन् ।
धुलो दूधमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख मात्रै रहेको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । ‘हामी ढुक्क भएर बस्न मिल्ने अवस्था त हुँदै होइन । जनसङ्ख्या हरेक दिन बढीरहेको छ । अस्तिको जनसङ्ख्याका आधारमा गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न पनि उत्पादन बढाइरहनुपर्छ’ पूर्वसचिव पौडेलले भन्नुभयो ।
उत्पादनले मात्रै नहुने बताउँदै पूर्वसचिव पौडेलले सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाएनपाएको एकीन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ‘जो मान्छेले प्राप्त गर्नु पर्ने हो, अत्यावश्यक जसलाई हुन्छ ती मान्छेहरुमा पुग्यो की पुगेन भनेर अनुगमन गर्ने र उपभोगको सुनिश्चित भए मात्रै आत्मनिर्भर भएको भन्न मिल्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा दूधको उत्पादन लागत विकसित देशको तुलनामा झण्डै दोब्बरभन्दा बढी छ । यसको प्रभाव धुलो दूध उत्पादनमा पनि परेको छ । धुलो दूधको उत्पादनका हिसाबले नेपाल आत्मनिर्भर भएको दावी गर्नुहुन्छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा श्रीराम घिमिरे ।
दैनिक रूपमा बढीरहने मागको पूर्तिका लागि उत्पादन बृद्धि र बजारीकरणको पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘यहीँको ताजा दूधबाट बनेको दूध हो, भर्खरको मितिमा उत्पादन भएको धुलो दूध हो भने चिनाउने काममा सरकारले पनि सहयोग गर्छ ।’ प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अलिकति महङ्गो भए पनि तपाईँहरूले यो दूध खाँदा हुन्छ भनेर बोलेर मात्रै होइन गुणस्तरमैँ दिनुपर्छ । यो हाम्रा लागि चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २१, २०७७, ०३:५८:००